Fahitana razana :: Fatin-dehilahy nitsingevana teny an-tanimbary • AoRaha
Lehilahy manodidina ny efapolo taona eo ho eo indray ity hita faty tao Ampahatrimaha, ny marainan’ny sabotsy lasa teo ity. Vehivavy maromaro mpanihika tamin’ireo tanimbary, izay dibo-drano noho ny orana nisesy tato anatin’ny andro maromaro, no nahatsikaritra ilay razana nitsingevana tsy lavitra ny toerana nisy azy ireo.
Niala teo amin’ilay tanimbary avy hatrany izy ireo raha vao nahita ilay razana sady nampandre ny lehiben’ny fokontany, ka ity farany avy eo no niantso ny komitim-pokontany sy ny fokonolona izay niara-nijery ilay razana teny an-toerana sy namoaka azy avy ao anaty rano. Tonga nijery ny razana teny an-toerana ihany koa ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo avy ao amin’ny sampan-draharaha monisipaly misahana ny fahadiovana sy ny fahasalamana (BMH), ka ny fizahana nataon’izy ireo no nahalalana fa efa eo an-dalam-paharavana tanteraka ilay razana izay tombanana ho efa nilona tao anaty rano, nandritra ny andro maromaro. Tsy nahitana ratra na zavatra mampiahiahy teny amin’ny vatany. Na izany aza dia niroso amin’ny fanadihadiana, izay nitarika io fahafatesany io ihany ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana.
Mbola teny aminy ihany koa ny fitafiana sy kirarony saingy tsy nahitana afa-tsy karam-pifidianana tany am-paosiny.Tamin’io no nahafantarana fa mponina avy ao amin’ny fokontany Ampatana ity hita faty tao amin’ny tanimbarin’Ampahatrimaha, izay toerana somary mihataka ny tanànan’Antsirabe ity.
Efa eo am-pelatanan’ny fianakaviany ny razana.
Fisavana tany Morafenobe :: Sarona ny kamiao roa nitondrana hazo an-tsokosoko
Fanafihan-jiolahy :: Tra-tehaka ireo tovolahy nandroba sy nandratra mpivady